Ku guuleystaha billadaha abaalmarinta Nobel wuxuu leeyahay bini-aadamku waa sii joogeysaa weligiis dhulka
ACCUEIL » SAYNISKA Noure laureate wuxuu yidhi insa aadamku wuu ku sii nagaan doonaa weligiis adduunka. - BGR
Shanta sano ee soo socota, NASA waxay qorsheyneysaa inay dadka dib ugu celiso dayaxa. Horey u sii socoshada, NASA waxay sidoo kale dejineysaa marxaladaha safarada laamiga ah ee Mars, iyo sahamintaan xiisaha leh ee baadi goobka ah ayaa si aan macquul aheyn u horseeday dad badan inay isweydiiyaan waqtiga uu soo maray bini aadamka ka hor. degto adduun kale.
Michel Mayor, saynisyahan, ku guuleysta abaalmarinta Nobel Prize ee fiisigiska, ma jecla inuu wax badan ka hadlo ninka ka tagaya dhulka cirka. Xaqiiqdii, wareysi dhowaan lala yeeshay AFP Duqa magaalada ayaa sheegay inuusan u arkin meel lagu qabsado waxyaabaha la midka ah ee dhulka iyo inaan ku isticmaalno kheyraadkayaga badan si aan uga dhigno mid caafimaad qaba halkii aan riyada ku riyoon lahaa.
Duqa magaalada wuxuu soo bandhigayaa doodiisa isagoo ku nuux nuuxsaday in masaafada udhaxeysaa meeraheena iyo nidaamyada qoraxda dariska ah ay aad u weyn yihiin. Isaga waa sax, dabcan, iyo xitaa muuqaalka muuqaalka u muuqda mid lagu noolaan karo marka aan eegno aragtidayada weli waa naga fog yihiin sidii aan hubin laheyn.
Xitaa haddii aan xaqiiqdii ogaan lahayn in meeraha la degi karo ay dadku ku noolaan karaan si xor ah oo nabdoon dushiisa, ma haysanno jid dhab ah oo lagu tago halkaas. Masaafada, waqtiga iyo amniga waa qodobo mamnuuc ah, iyo kor u qaadista ilbaxnimadeena iyada oo aan door bideyna boos cusub xitaa macquul ma ahan.
Meerayaashaas ayaa aad uga fog. Xitaa kiisaska rajo aad u fiican ee meeraha nolosha lagu noolaan karo ee aan aad uga fogeyn, dheh dhowr iyo toban sano oo iftiin ah, oo aan aad u badneyn, waa xaafada, waqtiga la galayo waa tixgelin badan, ”ayuu yidhi duqa magaalada AFP. . "Waxaan ka hadlaynaa boqolaal milyan oo maalmood iyadoo la adeegsanayo habka aan maanta haysanno. Waa inaan ilaalinaa meeraheena, waa mid aad u qurux badan oo weligeed deggan. "
Duqa magaalada wuxuu si gaar ah uga welwelsan yahay fikradda ah in marka bini aadamku gebi ahaanba baabi'yo Dunida, aan si fudud uga gudbi karno, isagoo ugu yeeraya "waalan".  Bini-aadamku ma laha doon doon noloshu xilligan, waxaana laga yaabaa inaanan waligeen sameyn karin. Teknolojiyaddu waxay noo oggolaan kartaa inaan sahaminno adduunyo kale iyo nidaamyada kale ee qorraxda, laakiin waa wax aan macquul aheyn in bini-aadamku kaliya xirmo oo baxo. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, ayay u badan tahay inay habboon tahay in meeraheena keliya lagu ilaaliyo hab shaqeynaya.
Source Source: Reid Wiseman / NASA
Kani waa booska cusub ee NASA ee ay astronauts-ka xiran doonaan Dayaxa - BGR